Kies aan shaqayn ama xiridda, Waa kuwan Solutions ah "
Kies u Mac aan shaqayn
Kies waa mid ka mid ah kuwa barnaamijyada in ay leeyihiin faaidooyin marka ay timaado telefoonnada gacanta Samsung. Laakiin marka ay timaado in la rakibo on Mac waxa uu leeyahay dhowr arrimood oo ay tahay in wax laga qabto. Marka ay timaado in Mac version of Mountain Libaaxa markaas waxaa aad muhiim u ah in la ogaado in isticmaalka badan ee Kies ma aha oo kaliya abuuraa arrimaha laakiin waxa ay sidoo kale caqabad ku Jidka barnaamijyada kale iyo sidoo sida iSync.
Tani version of Mac ah xaqiiqo ku tusi doonaa Kies la xiriira qalabka laakiin ma shaqayn doona dhamaan haddii user uu doonayo in ay. Samsung waxaa ka shaqeeya si loo hubiyo in Mountain Libaaxa noqonayaa la jaan qaada Kies laakiin aan ninna aqoon, in marka laga bilaabi doonaa. Si loo hubiyo in arrinta la xalin dhaqso suurto gal ah markaas waa in la ogaadaa in ay jirto shaqo ku hareeraysan in user a raaci karo si loo hubiyo in arrinta la xalin.
Ka dib waa habka uu soo sharaxay si faahfaahsan oo soo socda oo dhan oo ka mid ah si ay u la soo sheegnay hubiyo in Mountain Libaaxa helo Kies ma aha oo kaliya la ogaado, laakiin waxa ay sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira ka dhigi doonaa. Tallaabooyinka waxaa loo sharxay sida soo socota:
URL ayaa http://j.mp/dlkiesz waa in la raaco si loo hubiyo in Kies la soo bixi oo lagu rakibay on Mac.
DMG waxaa markaas in la furay si loo hubiyo in talaabooyinka horukaca ee habka
Kies20mac_s9218.pkg waa in la xaq markaas riixi. Marka liiska arbushin ilaa user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in Unarchiver waxaa loo isticmaalaa in lagu furo barnaamijka.
In tallaabada xigta user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in faylka loo magacaabay kies20mac_s9218 waxaa lagu arkay iyo furay.
Contents.pkg ayaa markaa waa in ay xaq u riixi oo markaas Tusmo Show Xirmada waa in la riixi.
Payload waa ka dibna in la double riixi si loo hubiyo in folder cusub oo ay magaca Payload 2 2 loo abuuray. Folder cusub Tani waa sidoo kale in la double riixi.
Folder codsiyada waa ka dibna in la double riixi in la hubiyo in waxyaabaha ku jira waxaa lagu soo bandhigay iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in Kies la jiideen folder codsiyada si aad u dhamayso ee buuxa.
Xaaladaha qaarkood haddii weli arrintan ay sii socoto markaas rebooting Mac ma loo xaliyo arrinta kaliya laakiin sidoo kale hubin doona in geeddi-socodka uu helo natiijo midho badan.
Kies u Mac ma xira
Waa arrin kale oo dhibaato taas oo ka dhigaysa user in uu dareemo diiqayo marka ay timaado Kies. Si kastaba ha ahaatee xalka arrintan la xiriira mar walba waa mid ku habboon telefoonnada gacanta Samsung ay sabab u tahay xaqiiqada ah in Kies ayaa la soo saaray oo ay Samsung Inc. Waxaa jira tobanaan kun oo geedi socodka in user a raaci karaan, laakiin hal wax oo ay tahay in la xusuusto in arrintan la xiriira waa in Kies waxa wanaagsan oo ku taageeraya software ilaa iyo haddii ay tahay in gacmaha xirfadeed.
Haddii barnaamijka software la unprofessionally isticmaalo, markaas waxa ay noqon kartaa musiibo dhacdo, waayo telefoonka mobile iyo user ma waayi karaa oo kaliya xogta oo dhan, laakiin xaaladaha qaarkood firmware ee telefoonka sidoo kale uu u kharribmay. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda waxaa la socda in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah, si loo hubiyo in arrinta aan lagu xalin kaliya, laakiin user helo nooc ka mid ah xalka in lagu dabakhi karaa mustaqbalka sida iyo sidoo kale haddii arrinta la soo gudboonaado. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah tallaabooyinka ay ku lug leeyihiin arrintan la xiriira:
Cable ayaa USB xira telefoonka kula computer waa in la jaro.
Tirada * # 7284 # waa in la wacay.
Codsiga Util Samsung ayaa soo bixi doona si toos ah.
Jidka in markaas waa in la raaco waa USB> Modem> hab PDA
Haddii hab horeba waa PDA xitaa markaas waa in la wareegay hab USB ka dibna mar kale hab PDA si aad u hesho arrinta la xalin sida Kies hadda ku xidhi doonaa telefoonka fudayd.
Kies daaqado aan shaqayn
Ka dib waa uu kaalinta xal ay tahay in la mariyo si aad u hesho arrinta la xalin arrintan la xiriira dhaqso suurto gal ah:
Waa ay khuseyso oo keliya waa Kies la soo bandhigeen xaaladda xira dhowr daqiiqo ka dibna disconnects. Geedi socodka waa sida soo socota:
Jidka waa files Program (x86)> Samsung> Kies> darawalka USB.
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe la double riixi si aad u hesho arrinta la xalin buuxda.
Waa ay khuseyso haddii qalab Kies la jawaab dhammaan. Geedi socodka waa sida soo socota:
Telefoonka waa in la jaro ka dekedda USB ah.
Kies waa in dib ka dib markii lagala soo http://j.mp/dlkiesz
Wadayaasha USB waa in sidoo kale in dib loo.
Telefoonka waa in la billaabeen
Marka geeddi-socodka la soo gabagabeeyo USB dekedda ka duwan waa in la isticmaalaa si loo hubiyo in Kies shaqeeyaan iyo habkan kale oo ey arrinta la xalin doono si buuxda.
Waa ay khuseyso haddii Kies aan la leh daaqadaha ka shaqeeya 8. Habka waa sida soo socota:
Jidka loo raaco arrintan la xiriira waa C:> Program Files> Samsung> Kies.
User ayaa markaas u baahan yahay in la helo Kies.exe.config iyo mar waxaa la helay ay tahay in la furay la buugayga ah.
User ayaa markaas u baahan yahay in la helo faylasha <supportedRuntime version = "v4.0" /> iyo <supportedRuntime version = "v2.0.50727" /> si loo hubiyo in arrinta la xalin. Buugayga waa in la badbaadiyey adigoo riixaya Ctrl + S.
Waxaa ka soo baxay in loo arki karaa kale ugu wanaagsan ee barnaamijka software Kies. Waxaa sidoo kale in la xuso in isagoo dukaan one stop ah barnaamijka loo sameeyay si loo hubiyo in user helo qalabka loo hal meel aan ka kaaftoomi kasta. Laga soo bilaabo maamulka Media si loo horumariyo oo shaqeeya qalabka Mobilego hubiyaa in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala oo ay ugu fiican ee aad uga soo baxdo barnaamijkan mar kasta oo loo isticmaalo. Wixii macluumaad dheeraad ah, aad u badan oo ku saabsan waxa ay baran karaan kale Kies .
> Resource > Android > Kies aan shaqayn ama xiridda, Waa kuwan Solutions ah